Umkhuleko wokuthi angishayele futhi angicele intethelelo. ? Ngemizuzu eyi-10
Umkhuleko wokungifonela futhi ungicele intethelelo akusona isenzo sobugovu, njengoba abantu abaningi ngokweqile bekubona.
Kunalokho, kuyisenzo sokukhulula nokwelashwa kwangaphakathi.
Kwesinye isikhathi sinabantu ezimpilweni zethu abahlala besihlukumeza kodwa ngasizathu simbe futhi, ngendlela emangazayo njengoba kubonakala, asikwazi ukuvele siyeke.
Kodwa-ke, lowo muntu ugcina eshiya kithi inqwaba yamanxeba angakapholi futhi inqobo nje uma engapholi siyobe siboshwe unomphela ngoba kuzoba yisigaba sempilo yethu esingakanqotshwa.
Yingakho lo mthandazo ubalulekile, ucingo lapho intethelelo luyi-protagonist ngumphilisi wamanxeba osheshayo futhi, ngokungangabazeki, sizobe sikulungele ukuqala ngaphezulu.
Ukuqala impilo entsha ungakaqedi ukuvala imijikelezo kufana nokuzama ukwakha ibhilidi emanxiweni enye engasibekezelanga isivunguvungu ngoba kungekudala, nesakhiwo esisha sizogcina siwe. Awukho umthandazo oqotho owenziwe ekucabangeni kobugovu.
1 Ngabe umkhuleko wokuthi ungifonele ucele intethelelo uhlala usebenza?
1.1 Umkhuleko wokungifonela ngemizuzu eyi-10.
1.2 Umkhuleko wokuthi ungifune emaminithini ayi-10 bese ucela ukuxolelwa
1.3 Umkhuleko wokuphelelwa yithemba lokungifonela
1.4 Umkhuleko kuSan Antonio ukungishayela ucingo
Ngabe umkhuleko wokuthi ungifonele ucele intethelelo uhlala usebenza?
Imikhuleko okukhulunywe ngakho kule ndatshana kusebenza ngaso sonke isikhathi. Udinga nje ukuthandaza ngokholo.
Sizokhombisa aba-4 abahlukile kosanta abehlukene. Ungabakhuleka bonke ngosuku olufanayo, ukuze uthole amandla amaningi.
Uma ufuna ukuqeda ukuhlupheka kwakho kumele uqale uthandaze njengamanje. Usizo lukaNkulunkulu kuphela oluzokwenza ukuba ngikubize ngokushesha.
Musa ukuchitha isikhathi esithe xaxa, unikeza imisho engezansi!
Umkhuleko wokungifonela ngemizuzu eyi-10.
Mnumzane, ngiyikholwa elithembekile, elicela usizo, likucela ukuthi umnikeze ucingo olungabalulekile, olungachaza izinto eziningi.
Ngifuna leyo kholi nokuthi yinhle, nokuthi iletha izindaba ezinhle ISan Expedito.
Wena, usanta wami ongumvikeli, uqondisa umuntu ukuthi enze isinqumo ngokuhle kimi.
Imizuzu eyishumi ingaba yisikhathi sokuba lowo muntu eze kithi, kodwa khumbula ukuthi umthandazo ungenza konke.
Ngamacala aphela ngokwedlulele khona-ke izindlela zokuphelelwa yithemba kakhulu kumele zisetshenziswe. Umkhuleko wobizo ngemizuzu elishumi uyasebenza ezimweni eziphuthumayo zangempela, lapho kungekho lutho olungaphezu kwamandla omuntu okufanele lwenziwe futhi kufanele sibeke konke ukukholwa kwethu emthandazweni wokuthi, kufanele kuphawulwe, unamandla.
Siyazi ukuthi iqiniso lihlala liyisihluthulelo futhi kulo musho kuyafana. Kungenziwa noma nini futhi kufanele kuphela kubonise ukholo futhi isidingo esinaso lapho sithandaza.
Umkhuleko wokungibheka ngemizuzu eyi-10 futhi ungicele intethelelo
O, Sithandwa waseCyprian othandekayo, ngobuhle bakho nangobuningi bakho ezibusisweni kulabo abakunxenxa, ngicela isihe, ngiyakuncenga, oh, ezulwini, vumela lokho ukuthi ngikukhonze, ukungifuna ngomzimba nangomzimba, ngoba ngidinga ukwakhe uthando, uthando lwakho kanye nenkampani, oh, San Cipriano, onamandla!
Sengathi isicelo singafinyelela ubulula bakho obungcwele, ngidinga ukuthi unginike isimangaliso ofuna kimi ukulangazelela kwakho nothando lwakho oluphelele kakhulu ...
O, Nkosi, yiba naye (asho igama lakhe) angibheke lapho evuka embhedeni wakhe futhi embhedeni futhi ... ngoba konke kimi!
Ukuthi uyangikhumbula, ukuthi ngeke akwazi ukwenza impilo yakhe ngaphandle kwempilo yami ... oh, mlondolozi wabathembekileko esimthandayo futhi siyamcela futhi ... enze ukuthi umuntu engimthandayo, abuyele emuva ezimfundweni zakhe futhi angifune, ubhala ngokungibhalela eceleni nokuthi izinyawo zakhe zimyisa esihlalweni, lapho zingithola khona ...
O, isimangaliso semiphefumulo esivalela isililo, nginike impilo, nginike ukuthula bese unginika konke okungitshela khona, ukuthi ukubuya kwesithandwa sami kusondele kakhulu ...
Benemérito San Cipriano, isibusiso sakho siza kimi kanye naso, isimangaliso engikulangazelelayo, Baba wami ...
Ubaba ongcwele! Amen
Lomkhuleko unamandla amakhulu futhi kufanele wenziwe kuwo izikhathi eziphuthumayo zangempela Ngeke sibe nobugovu futhi sibuze ngaphandle kokucabanga ngomunye umuntu.
Ukuthula kwenhliziyo kuvame ukuncika komunye umuntu, kepha uma sibheka kahle ngaphakathi kwezinhliziyo zethu, kungenzeka kakhulu ukuthi sizothola ukuthula okuncane futhi sinethemba lokuthatha isikhathi futhi sikwazi ukuphakamisa umthandazo okhethekile kulowo ophakeme.
Kungumkhuleko ukungishayela ucingo ucele intethelelo okungenziwa uma nje kunesidingo sokuhlangana nalowo muntu okhethekile.
Kungaba ingane, umlingani wangaphambili, ilungu lomndeni noma umngani othile esingakumbonanga isikhathi eside futhi osuvele edinga lokho kuthintana naye okuqondile okungaba naye kuphela lapho ebhekene nalowo muntu.
Umkhuleko wokuphelelwa yithemba lokungifonela
Baba othandekayo, ngiyesaba ukwenqatshwa… Ngiyacela ngicela (IGAMA LOMUNTU) Ungishayele ungitshele ukuthi ungizwela kanjani, ngiveze yonke imizwa yakho.
Futhi ngakho-ke ngingajabula ukungabuyiselwa. Nginike amandla okubhekana nawo ngaphandle kobuhlungu, ngiyazi ukuthi ngasohlangothini lwakho ngiyakwazi ukunqoba futhi ngibekezelele konke okuzayo. Ungangishiyi Baba, eduze kwakho nginamandla
Lapho sihlala sinomuntu engqondweni, ngeke sikwazi ukukugwema ukufuna ukwazi ngazo zonke izikhathi ngoba isidingo sinamandla futhi sifuna ukuxhumana kodwa asikwazi ukuma size siye ekhaya, ngakho-ke ukukhala kocingo kubonakala kungukukhetha okungcono kakhulu.
Le yinhloso yalokhu umthandazo wokuphelelwa yithemba. Kubizwa ukuthi ngoba sekuwumthombo wokugcina esizobe sisebenzisa futhi uyasebenza futhi unamandla amaphesenti ayikhulu.
Imikhuleko iyodwa idlulisa amandla amahle futhi uma lo mthandazo siwuphakamisa ngokholo olukhulu lapho imiphumela izomangaza.
Emlonyeni wethu sinamandla amakhulu kakhulu, ngawo singakha noma sibabhubhise. Kungakho lo mthandazo kufanele wenziwe ngobuqili nangomthwalo ophelele walokhu esikwenzayo.
Njalo ukulinganisa abanye njengabakhulu kunathi, njengoba izwi likaNkulunkulu lisho.
Umkhuleko kuSan Antonio ukungishayela ucingo
San Antonio Namuhla ngiza kuwe ngoba ngidinga usizo lwakho ...
Ngifuna (IGAMA LOMUNTU) angishayele ngizimisele ukumtshela indlela engizizwa ngayo kodwa kuphela uma engashayela ucingo ...
Ngiyesaba ngoba ngingahle ngilahlwe kodwa ngidinga ukwazi. Nguwe wedwa okwazi ukungisiza ngalolu daba. ISan Antonio Ngifuna ukubhekana nalesi sikhathi ngoba ngidinga ukwazi ukuthi ngabe ngiyabuyiselwa yini futhi uma kungenjalo, ngizokwazi ukubheka ama-horizons amasha ...
Le kholi isho lukhulu kimi.Ngakho ngiyidinga ukuba yenzeke ngokushesha okukhulu. Nginovalo kodwa ngiyazi ukuthi ngingayithola.
Ukucela ucingo kungokwemvelo.
Ziningi izinhloso lolu cingo olunazo, ngokwesibonelo kungaba ukufeza ukuxolelwa okudingeka ukuqhubekela phambili, ukumane wazi ukuthi unjani lowo muntu, ukuhambisa ukuthi usesekhona ngaso sonke isikhathi, ngamafuphi, ngezinto eziningi.
Into emangazayo ukuthi isicelo sihlala sinjalo: ngishayele.
Uma kunjalo, buza nje, kulula lokho. Ngaphandle kwamahloni noma ukwesaba kepha nge inhloso ecacile nethembekile yokuthola lokhoxhumana esikulangazelela kakhulu.
Bonke banamandla amakhulu futhi uma bethandazelwa bonke ngenxa yomuntu ofanayo bayoba namandla amaningi.
Njalo thandaza ngokholo umthandazo wokungifonela ngemizuzu eyi-10 futhi ujabule kakhulu othandweni!
Imikhuleko eya kuSanta uCyprian